यस्ता छन् कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकका एजेण्डा | हिमालयन ट्रिबुन
२०७८ बैशाख ५, आईतवार ०९:४१
यस्ता छन् कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकका एजेण्डा
HT २०७८ बैशाख ५, आईतवार ०९:४१
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो २ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ । यसअघि चैत ३० गतेका लागि बोलाइएको बैठक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका भाइको निधन भएपछि स्थगित भएको थियो ।
बैठकमा मुख्यगरी १४ औं महाधिवेशनका तयारी, क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका लागि म्याद थप र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल हुने बताइएको छ । कांग्रेसले चैत ३० गतेसम्म क्रियाशील सदस्यताका काम सक्न जिल्ला कार्यसमितिहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर अझै केही जिल्लामा क्रियाशील वितरणको काम सकिएको छैन । त्यस्तै बैठकमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि छलफल हुनेछ ।
कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सरकार गठनमा सहयोग गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङविरूद्ध कांग्रेसकै नेतृत्वमा अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि अहिलेको सरकार हटाएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा कांग्रेस रहेको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा नौ महिनाको अवधिमा ३० गैँडाको मृत्यु
Spread the loveचितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ३० गैँडा मरेका छन् । तीमध्ये २६ वटा प्राकृतिक कारणले मरेका हुन् भने चारवटा चोरीशिकारीले मारेका हुन् । निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीका अनुसार पछिल्लोपटक वैशाख १ गते गैँडा मृतावस्थामा फेला परेको थियो । गत […]
२०७८ जेष्ठ ३०, आईतवार १३:५२
मुख्यमन्त्री राउतलाई मन्त्रिपरिषद समावेशी बनाउन प्रदेश प्रमुखको पत्र
२०७८ जेष्ठ ९, आईतवार १४:०४
मलाई चुनावबाट पछि हट्न धेरै जनाले थर्काएः डा. देवकोटा
२०७७ आश्विन १, बिहीबार ०९:०९
वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन
२०७७ चैत्र २८, शनिबार ०९:१३
संसद सदस्य नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने अनि विधि र पद्धतिको कुरा गर्ने ?
२०७७ पुष ३, शुक्रबार १५:०३
यो बैठकबाट सबै समस्याको हल खोज्ने समय हो, भेलाबाट होइनः उपाध्यक्ष गौतम
२०७७ चैत्र २४, मंगलवार १४:१७
बाग्मतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा माधव नेपाल पक्षद्वारा समानान्तर कमिटी घोषणा
महोत्तरीमा सुनचाँदी पसलेलाई गोली हानी लाखौँको डकैती
चीनले पठायो अन्तरिक्ष स्टेशनमा राख्न तीन अन्तरिक्षयात्री
चितवनमा एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप
महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुमोदन गर्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै
विपतमा परेकाहरुको उद्धार र राहतकारी व्यवस्था मिलाउन पूर्वराजाको आग्रह
चीनबाट ४० लाख डोज खोप ल्याउन गृहकार्य
इटाली युरोकपको अन्तिम १६ मा